Tweetbot 4 inogadziridzwa nemafuta uye mashoma nhau | IPhone nhau
Hondo yevatengi veTwitter, yekuravira mavara atichataura pano, asi chokwadi ndechekuti Tweetbot hapana mubvunzo kuti ndeimwe yeanonyatsoita wechitatu-bato Twitter vatengi veiyo iOS iyo yatinogona kuwana. Nekudaro, Tweetbot inogadziridza iri padanho rakaenzana neyekare WhatsApp matsva, nekusa taura nezvenzira yavo yekutenga neimwe vhezheni itsva. Asi mitambo padivi, isu tichaenda kukuudza izvo zvinodzosa Tweetbot 4, iyo yakagadziridzwa mangwanani ano pamwe nekugona kwekushandisa mafirita ane simba rekugadzirisa ma tweets muTimeline.
Tweet Uye zvakare, runyorwa rwakareruka renhau dzatinokuratidza pazasi uye dzinodzokororwa zvakanyanya maererano nesarudzo yekupedzisira.
Yakagadziridzwa ruzivo uye mhinduro muma tweets
MaGIF nemavhidhiyo izvozvi zvinozosiyaniswa usati watamba
Inobvumira kuisa mavhidhiyo echipiri zana nemakumi mana
Zvimwe uye zvirinani mabasa eiyo 3D Kubata
Zvisungo zvemifananidzo yakatumirwa kuTwitter hazvicharatidzwe
Asi chishongo mukorona ndiko kusefa basa. Kutenda kune mafirita matsva, tinogona kusarudza kuti ndeapi ma tweets atinoda kuverenga, asi nenzira chaiyo, ndiko kuti, tinogona kusarudza kuti chete magwaro ekudzokorodza akasefa muTimeline, pamusoro pekumisikidza zvimwe zvido. Kutenda mafirita aya, isu tichakwanisa kuzvizivisa isu nekukurumidza uye nemazvo pamusoro wenyaya inotinakidza mubvunzo, semuenzaniso, kana panguva yeWWDC16 tanga tichida kuverenga chete zvemukati nezveApple, takaisa mazwi akakosha uye kuti tishande.
Sevazhinji venyu munoziva, Tweetbot inobhadharwa, uye handisi kuzotaura kuti zvakafanira kune wese munhu, asi kune avo vanhu vane hunyanzvi nharaunda vanoshandisa Twitter sechishandiso, kana chero munhu anovaka ruzivo rwavo pane izvo zviri pasocial network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Tweetbot 4 inogadziridzwa nemafuta uye mashoma mashoma maficha